I-iBroker: Iluphi uhlobo lomthengisi, isevisi yamakhasimende, izimakethe enikezayo | Ezezimali Zomnotho
Namuhla namuhla kunabadayisi abaningi abahlukene esingenza ngabo imisebenzi ehlukahlukene ezimakethe zezimali. Kodwa noma kunjalo, akuzona zonke okufanele zithenjwe futhi akuzona zonke ezinikeza ikhono lokuhweba zonke izimakethe. Kulesi sihloko sizokhuluma ngomthengisi waseSpain okuthiwa i-iBroker, osethole ukuthandwa okuningi phakathi kwabadayisi besikhathi esizayo abaqeqeshiwe.
Uma ufuna ukwazi okwengeziwe nge-iBroker, ngincoma ukuthi uqhubeke ufunda. Sizochaza ukuthi hlobo luni lomthengisi, ukuthi isevisi yamakhasimende isebenza kanjani, yiziphi izimakethe elinikezayo futhi, ukuphetha, izinzuzo kanye nebubi elikuvezayo.
1 Iluhlobo luni lomthengisi i-iBroker?
1.1 Isevisi yamakhasimende
1.2 Izimakethe ezihlinzekwa yi-iBroker
2 Izinzuzo kanye nokubi kwe-iBroker
Iluhlobo luni lomthengisi i-iBroker?
Uma sikhuluma nge-iBroker, sibhekise kumthengisi waseSpain wokuphuma kokunye. Lokhu kuhlanganisa izimakethe ze-Forex, ikusasa kanye nama-CFDs. Yazalwa ngo-2016 ngenxa yokuphuma kwe-Auriga Global Investors futhi ilawula le minyango eyayiphethwe yiClicktrade. Namuhla ingumdayisi wereferensi eSpain ngenxa yezinsizakalo nemikhiqizo enayo, okungayo amanye adayiswe ezimakethe zomhlaba. Kufanele kuqashelwe ukuthi ukuphela komthengisi waseSpain ozuze lokhu.
Ezimakethe zesikhathi esizayo, ukunikezwa kwe-iBroker kukhulu kakhulu, kokubili kumapulatifomu kanye nasezinkontilekeni. Ngakho-ke, kungenye yezinketho ezinhle kakhulu uma sifuna ukuqala kulolu hlobo lwemakethe eSpain.
Elinye lamaphuzu aqinile anikezwa yi-iBroker izinhlobo zayo ezihlukahlukene zesevisi yamakhasimende. Ngale ndlela, amaklayenti angakwazi ukusebenza ezandleni zawo noma nini lapho efuna, okuwusizo kakhulu futhi kunenzuzo emakethe kubaluleke kakhulu izinketho zezimali noma ikusasa. Ukuxhumana nesevisi yamakhasimende e-iBroker, sinezinketho ezilandelayo:
Thumela a imeyili ku-imeyili elandelayo: customers@ibroker.es
Iya ku ihhovisi eliphakathi etholakala ku-102-104 Caleruega Street eMadrid. Lokhu kukhetha, kunjalo, kutholakala kuphela kubantu abasendaweni.
Shayela ku inombolo yocingo 917 945 900. Amahora akhe NgoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu kusukela ngehora lesishiyagalombili ekuseni kuze kube yihora leshumi ebusuku.
Akugcini nje ngokusinika izinketho ezimbalwa zokuxhumana, kodwa futhi nohlelo olubanzi kakhulu lokwenza kanjalo. Ngaphezu kwalokho, sinenye indlela yokwazi izindaba zakamuva ezivela kulo broker ngesiteshi sakhe se-Twitter. Nakuba kungeyona indlela efanelekile yokuxazulula izinkinga ezihlobene nama-akhawunti ethu omuntu siqu, singaxhumana nomphakathi futhi sibone izibuyekezo zakamuva.
Izimakethe ezihlinzekwa yi-iBroker
Isici esibalulekile lapho ukhetha broker kukhona izimakethe esebenza kuzo. Sizobhala ukuthi yiziphi izimakethe ezitholakala ku-iBroker:
Ikusasa: Kwenza kube nokwenzeka ukuxoxisana ngezimakethe ezihweba kakhulu emhlabeni wonke naseYurophu, njenge DAX, Eurostoxx, Mini-DAX, Ibex, SP500, Mini-Ibex, Bund and Spanish Bond, phakathi kwabanye abaningi.
Ama-CFD esitokweni nama-ETF: Ikakhulukazi ezimakethe zaseSpain, eYurophu naseNyakatho Melika.
I-forex: Endleleni ye-Direct Market Access, i-iBroker ivumela ukusebenzisa imakethe yokushintshiselana ngemali yangaphandle ngamabhange angamashumi amabili anikezela ngezimali.
Ama-CFD kuma-indices kanye nempahla: Ivumela ukusebenzisa izimakethe ezinkulu zomhlaba, njenge-SP500, uwoyela, i-Dow Jones kanye negolide elinokuguquguquka okukhulu.
Izinketho zezimali: Ungafinyelela izinketho ze-MEFF, CME kanye ne-Eurex, phakathi kwezinye eziningi.
Ama-CFD kuma-cryptocurrencies: Inikeza ithuba lokuhweba ngezingxenyana ze-0.01.
Imakethe ye-LMAX: Ungumthengisi we-Prime Forex. Nge-iBroker singasebenza ngaphakathi kwale ecosystem ngezimo zokuhweba ezithuthuke kakhulu ngefomethi ye-DMA.
I-X-Rolling FX: Kuyinkontileka yesikhathi esizayo ekhethekile eyenziwa ngezimali ze-MEFF. Ikuvumela ukuthi ufinyelele imakethe ye-Forex ngokuphepha namandla afanayo njengekusasa, kodwa ngendlela evumelana nezimo. Kulokhu, isiphindaphinda akuyona i-100.000, kodwa i-10.000. Kumele kuqashelwe ukuthi leli kusasa lihlala njalo, okungukuthi, aliphelelwa yisikhathi.
Ngaphandle kwalezi zimakethe, I-iBroker inohlelo oludidiyelwe lokuhweba oluzenzakalelayo. Ukuhweba nge-algorithmic lapho ungafinyelela khona izinhlelo zekusasa ezingaphezu kuka-1.500 kanye nezinye izimakethe eziphuma kokunye.
Izinzuzo kanye nokubi kwe-iBroker
Manje njengoba sesazi okwengeziwe mayelana ne-iBroker, sizofingqa izinzuzo kanye nokubi zalo broker waseSpain. Njengamaphuzu avuna wena kufanele ungumthengisi wezokuphepha omkhulu wemakethe yaseSpain, njengoba ilawulwa yi-CNMV futhi ivikelwe yi-Fogain, efaka umshuwalense ofika kuma-euro ayizinkulungwane eziyikhulu ngomnikazi ngamunye. Ngaphezu kwalokho, ingenye yabathengisi abambalwa abaphuma kuyo abasebenzisa isiteji esibizwa nge-TradingView, okwenza kube lula kakhulu ukuqapha nokuhlaziya amashadi.
Kufanele futhi kuqashelwe ukuthi inikeza izinketho ezinhle kakhulu zokuhweba izimakethe ze-CFD, kokubili ngezindleko zokusabalalisa kanye namakhomishini nge-LMAX. Asikwazi ukukhohlwa mayelana cryptocurrency CFDs inikeza noma, amakhomishini lawo akhanga kakhulu. Ngaphandle kwalezi zinketho ezinhle, ukusebenza kwayo kwe-DMA noma okumsulwa kwe-ECN Forex kungenye iphuzu elivuna lo broker waseSpain.
Njengoba sishilo phambilini, I-iBroker iyinketho ekahle yabathengisi besikhathi esizayo abaqeqeshiwe. Ngaphezu kwalokho, inezinketho ezimbalwa zokuhweba okuzenzakalelayo. Elinye iphuzu elivuna yona yindlela elula enikeza ngayo amakhasimende ayo ukuthi axhumane nenhlangano. Ngaphandle kokungewona ukuphikisana okuqinile kwemisebenzi ngokwayo, kuyisici esibalulekile okufanele sinakwe ukuze kuthuthukiswe abasebenzisi.
Kodwa-ke, kufanele futhi sigqamise okubi okumbalwa elethwa yi-iBroker. Ezinkontilekeni eziningana zamazwe ngamazwe amakhomishini alo broker aphakeme kunamanye ama-broker aseMelika. Yini enye, Ayitholakali kubahwebi bamazwe ngamazwe abavela e-Latin America.
Uma uzele ukuzozama i-iBroker, ungasitshela kumazwana ukuthi ucabangani ngalo mthengisi futhi uma uyincoma.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ibha » iBroker
Izingcaphuno zikaLarry Page